Times Of Nepali » राजेश हमाल भन्ने मान्छे को हो? मलाई भेटाइदिनुस म पिट्छु :- कलाकार सुशील पोखरेल
४ असार २०७६ |
राजेश हमाल भन्ने मान्छे को हो? मलाई भेटाइदिनुस म पिट्छु :- कलाकार सुशील पोखरेल
काठमाण्डौ सुशील पोखरेल नेपाली सिनेक्षेत्रमा चर्चित अनुहार हो । विशेष गरी खलपात्रको भूमिकामा राम्रै प्रभाव पारेका पोखरेल पर्दामा जति गरम देखिन्छन बास्ततबिक जीवनमा त्योभन्दा धेरै सरल र नरम छन। पछिल्लो समय ढाड र खुट्टामा आएको समस्याका कारण सिनेमा क्षेत्रमा पहिलेजस्तो सक्रिय नभए पनि बेलाबखतमा उनी सिनेमामा आइरहेका हुन्छन् । ललितपुरको लुभुमा जन्मेका पोखरेल उमेरले ५० को हाराहारीमा पुगे भने उनका दुई छोरी पनि रहेका छन् ।
कक्षा १० सम्म सात ओटा स्कुल
पोस्टर हेरेर कलाकार बन्ने इच्छा
पोखरेल सानो छँदादेखि नै सिनेमा एकदमै हेर्ने गर्थे । बिदाको दिन भयो कि घरमा झगडा गरेर हुन्छ कि, के गरेर हुन्छ, सिनेमा हेर्न गई हाल्थे । सिनेमा नहेरे पनि सिनेमाको पोष्टर मात्र हेरेर आनन्द लिने गर्थे । पोष्टर हेरेरै उनले कलाकार बन्ने निधो गरेका थिए । सिनेमा क्षेत्र वा नाटक क्षेत्रमा कोही चिनेको मान्छे थिएन । प्लस टु गरेपछि खाली भएको बेलामा गाँउमा केही गरौँ भनेर साथीभाइसँग सल्लाह गरे । उनले साथीलाई नाटक देखाउने भनेर प्रस्ताव राखे । त्यही प्रस्तावअनुसार, उनीहरुले ‘राँको’ नामक नाटक देखाउने निधो गरे ।
दाईको कमाईले कलाकार बने
उनले सिनेमाको भिलेन बनेर लगभग तीन सय सिनेमामा काम गरिसकेका छन् । भिलेन बनेर काम गर्दा उनले जीवनमा मायासँगै घृणा पनि पाएका छन् । उनी सम्झिन्छन्, ‘धेरै पहिले म एक ठाउँमा जाँदा एक जना पुरुष साथीले मेरो पछि पछि लात्ती र मु्ड्की ताक्ने गर्नुभएको थियो । त्यो बेला मलाई फर्केर हेरौँ कि, के गरौँ नै बनायो । खासमा सिनेमा हेरेर भिलेनलाई कुट्नुपर्छ भन्ने मानसिकता उहाँमा रहेछ ।
पोखरेलका २ वटी छोरी छन् । एउटी मास्टर्स गर्दैछिन्, कान्छी छोरीले भरखरै एसईई दिएकी हुन् । एक दिन उनले परिवारसँगै आफ्नो सिनेमा हेरेका थिए । सिनेमाको अन्त्यमा उनलार्ई राजेश हमालले रगताम्मे हुने गरी पिट्ने सिन थियो । उनकी कान्छी छोरी राजेश हमालले पिटेको देखेर यति जोड जोडले रोइन् कि उनी आफै पनि रुन बाध्य भए । छोरीले उनलाई भनेकी थिइन्, ‘राजेश हमाल भन्ने मान्छे को हो ? मलाई भेटाइदिनुस् म पिट्छु ।’ त्यति बेला भने उनलाई भिलेन बनेकोमा पछुतो महसुस भएको थियो ।
उज्यालो अन्लाईन बाट साभार गरियको
प्रकाशित मिति ४ असार २०७६, बुधबार ११:५५